प्रमुख, प्रदेश नं. ५
० तपार्ई यस क्षेत्रका जनतालाई कसरी चिनाउनुहुन्छ आफूलाई ?
— वास्तवमा भन्नुपर्दा यहाँका जनताले संघीयताको लागि पहिलेदेखि नै संघर्ष गर्दै आएका थिए । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । स्थानीय निकायले आफ्नो काम कारबाही सुरू गरिसकेका छन् भने प्रदेश सभाले पनि आफ्नो मातहतमा रहेका काम तथा विकास निर्माणका काम आफ्नै प्रदेशबाट सञ्चालन गर्ने अभिलाशा, आकांक्षा थियो त्यो अहिले आएर पूरा हुने अवस्थामा छ । हालै मात्र प्रदेश सांसदहरूको शपथ ग्रहणको काम सकिएको छ । यसअनुसार संघीयता कार्यान्वयन गर्ने तर्फ हामी लागेका छौँ । आगामी दिनको कार्यक्रम भनेको प्रदेश सभाको संसदलाई कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको लागि संविधानमा भएको व्यवस्थाहरू निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभा निर्वाचन परिणाम घोषणा गरेको ३० दिन भित्र संसद बोलाउन आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसको लागि हामी राजनीतिक दलहरूसँग कहिले संसद बोलाउने भनेर छलफल गर्दैछौँ । यसरी नै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सभाको बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलको सरकार बनाउने व्यवस्था रहेको छ र त्यसै अनुसार हामी यी दुवै कामलाई अगाडी बढाएका छौँ । प्रदेश सरकार गठन भइसकेपछि यहाँको जनताको मनोभावना बुझी विकास निर्माणका काम अगाडि बढ्दै जानेछ ।
० तपाईं प्रदेश नं. ५ को लागि नयाँ हुनुहुन्छ, त्यसकारण त्यहाँको जनताले तपार्ईलाई चिन्नको लागि आफ्नो बारेमा बताइदिनु न ?
— म नेपाल सरकारको निजामति प्रशासनमा निजामति सेवा अन्तर्गत २०३७ सालमा प्रवेश गरे । जल तथा सिँचाई विभागको कार्यकारी निर्देशकको भूमिका पनि निर्वाह गरे । २०६४ सालमा नेपाल सरकारको सचिवमा बढुवा भएँ । २०६४ सालदेखि २०६९ सालसम्म भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, सिँचाई मन्त्रालय, सूचना आयोग, कृषि मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालय लगायतका मन्त्रालयहरूमा काम गरें । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनबाट गठित सरकारबाट ऊर्जा मन्त्री, सिँचाई मन्त्री र भौतिक योजना मन्त्री, उड्ययन तथा वातावरण मन्त्रीका रूपमा काम गरें । यसरी नेपाल सरकारको काम गरेपछि विगत केही समय यता राष्ट्रिय जनता पार्टीमा आबद्ध भएर काम गरिरहेको छु ।
० तपार्ईं नेपाल सरकारको पूर्व सचिव तथा मन्त्रीसमेत हुनुभयो, आफ्नो सेवाकाल समाप्त भएपछि मात्र राजनीतिमा लाग्नुभयो, कसरी लाग्नुभयो राजनीतिमा ?
— नेपाल सरकारको जागिरबाट अवकाश पश्चात पनि जनतासँग कसरी जोडिरहने, जनताका कुराहरूलाई राज्य समक्ष पु¥याउन कसरी प्रतिनिधित्व गर्ने भनेर जागिर अवधिमा आर्जन गरेको ज्ञान र सीपलाई अगाडी बढाउनको लागि पनि राजनीतिमा सक्रिय हुन्छु भन्ने लागेको थियो । त्यसपछि मैले राजनीतिको रूपमा पनि आफूलाई स्थापित गर्न थालें ।
० तपाईं सरकारी सेवाको कार्यकालमा हुँदा जनताको लागि के कस्ता काम गर्नुभयो ?
— मैले जनताका चाहनाअनुसारका खासगरी विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयमा भएको कारणले पनि खाद्य सुरक्षाको लागि आवश्यक कार्यक्रम, कृषि तथा सिँचाईका लागि आवश्यक पर्ने कार्यक्रमहरू ल्याएँ । प्रदेश नं. ५ को हिसाबमा नै भन्नुपर्दा पनि सिँचाईको लागि आवश्यक प्रक्रिया अनुसार नै योजनाहरू अगाडी बढाउनमा मैले भूमिका निर्वाह गरेको छु । सञ्चालनमा रहेका धेरै पुनरवासीय आयोजनाहरूलाई अगाडी बढाउन मैले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको छु । म कृषि मन्त्रालयमा हुँदा होस् या सिँचाई मन्त्रालयमा, जनभावना अनुसार नै विकास निर्माणका कामहरू गरेको छु । आफूले गरेको काममा म सफल नै बनेको छु जस्तो लाग्छ मलाई ।
० प्रदेश नं. ५ का विकासका पूर्वाधारहरू के–के छन् ?
— विकासका पूर्वाधारहरूको कुरा गर्नुपर्दा अन्य प्रदेशमा भन्दा प्रदेश नं. ५ मा बढी नै सम्भावना देख्छु । कालीगण्डकीको पानीबाट तिनाउ नदीमा लगेर सिँचाई गर्ने हाम्रो अध्ययन भइरहेको छ । हुलाकी सडक लगायत अन्य सडकहरूको आयोजना पनि यस क्षेत्रमा रहेका छन् । जसले गर्दा यस क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । उद्योग कलकारखाना, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि राम्रो सम्भावना रहेको छ । यी सबैलाई अगाडी बढाउन प्रदेश सरकारलाई सहज हुन्छ किनभने धेरैजसो कार्यक्रमहरू सुरू भइसकेको छ । यस्ता योजनाहरू सुरू भइसकेका कारण प्रदेश सरकारलाई धेरै मिहिनेत गरेर खाका तयार पारिराख्नुपर्ने आवश्यकता छैन । यी कुराहरूलाई बढाउन सकियो र खासगरी युवाहरूमा विदेशिने क्रम बढेको छ, त्यसलाई रोक्न विकास निर्माणका काम गरेर युवालाई यहिँ रोजगारी दिन सकियो भने यस प्रदेशको आर्थिक स्तर उकासेर समृद्धतर्फ लाग्न सक्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।
० यस प्रदेशको विकासको लागि तपार्ईको भूमिका कस्तो रहनेछ ?
— प्रदेश प्रमुखको हैसियतले म प्रत्यक्ष रूपमा विकास निर्माणमा सहभागि नभए पनि यहाँ देखिएका विकासका सम्भावनाहरूलाई मूर्त रूप दिन प्रदेश सरकार तयार भएमा मेरो तर्फबाट के कस्तो सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ म त्यो गर्न तयार छु ।
० प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा दिनु पर्ने विषय के हो जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?
— सबैभन्दा पहिले त संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नु नै प्राथमिकताको काम रहेको छ । अन्य कामहरूमा जनचाहना अनुसार घरदैलोमा सरकार अन्र्तगत लागेर बाँकेमा राजधानी भएको कुरा अवगत गराउनुपर्छ । यस लगायत प्रशासनिक झन्झटबाट पनि अलिकति पनि हामीले राहत दिन सक्याँै भने जनमानसमा राम्रो प्रभाव पार्न सकिन्छ । त्यस्तै विकास निर्माणका कार्यहरूलाई बढाउँदै लगियो भने पनि जनमानसमा सकरात्मक प्रभाव पार्न सकिन्छ । अन्ततः यस प्रदेशका जनता र सम्पूर्ण प्रदेश नै समृद्ध हुने अवस्था म देख्दछु ।
० प्रदेश नं. ५ को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अवस्था कस्तो छ ?
— यहाँ आर्थिक विकासको सम्भावना राम्रो रहेको छ । यहाँ आर्थिक क्रियाकलाप कृषि, उद्योग, सडक, विद्युत निर्माणसँग सम्बन्धित काम भइरहेको छ । अरू प्रदेशहरूको तुलनामा आर्थिक समृद्धिमा सहज नै देखिन्छ । प्रशासनिक रूपमा पनि जनमानसमा सेवा पु¥याउन सजिलो नै छ । यातायातको सुविधा र सम्भावना भएको कारण पनि यहाँ क्षेत्रीय सेवा सुविधाहरू पु¥याउन सहज छ ।
० प्रदेश प्रमुखको कार्यक्षेत्र के हो ?
— सरकारको लागि सहज गरिदिने जस्तै केन्द्र सरकारको कानुनी प्रक्रियाहरूमा सहज गर्ने भूमिका राष्ट्रपतिको हुन्छ त्यस्तै प्रदेशमा प्रमुखको हुन्छ । प्रदेश सरकारले बनाएका योजना तथा नियम कानुनलाई तर्जुमा गर्ने, स्वीकृत गर्ने, प्रदेश विकासको लागि सुशासन कायम गर्ने र सहजकर्ताको भूमिकाको रूपमा पनि प्रदेश प्रमुख रहेको हुन्छ ।
० तपाईं राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त हुनुभएको छ, यसले प्रभाव पार्न सक्छ ?
— मैले प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि लामो समय काम गरेको छु । पछि मन्त्री हुने अवसर पनि मिल्यो र संयोग नै भन्नुपर्छ पछिल्लो समय म राजनीतिक क्षेत्रमा पनि आबद्ध छु । मलाई के लाग्छ भने मैले सँगालेका अनुभवहरूले गर्दा प्रदेश सरकारलाई जनभावना अनुसार काम गर्न मेरो सल्लाह सुझावले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।
० अन्त्यमा यस प्रदेशका जनताहलाई तपाईं के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?
— जनताको चाहना अनुसार संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्दैछौँ । संघीयतालाई मूर्त रूप दिन युवा, बुद्धिजिवि, समाजसेवी, पत्रकार सबैको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । यसमा सरकारलाई सबै तर्फबाट यसरी नै सहयोग मिल्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।